Ungayifunda kanjani ibhayibheli ukuze uliqonde ▷ ➡️ Discover Online ▷ ➡️
Ungayifunda kanjani ibhayibheli ukuze uyiqonde
Ungayifunda kanjani ibhayibheli ukuze uyiqonde. Kunezindlela eziningi zokufunda iBhayibheli ukuze uliqonde. Kodwa-ke, umuntu ngamunye kufanele shintsha ukufunda kwakho ngokolwazi lwakho yemibhalo engcwele.
Ngakho-ke, kuya ngezinga okulo, sikunikeza iziphakamiso ezithile ungaqala kuphi ukukuqonda kahle.
1 Indlela Yokufunda IBhayibheli Ukuze Uliqonde: Izinyathelo Zokuqala
2 Kufanele ngilifunde ngokulandelana kanjani iBhayibheli?
2.1 1. Uma kungokokuqala ukuxhumana neBhayibheli:
2.2 2. Uma ufuna ukujulisa ulwazi lwakho jikelele ngeBhayibheli:
2.3 3. Izincwadi okufanele zifundwe noma kunini:
2.4 Izincwadi uma usuthuthuke kakhulu:
3 Imisebenzi yokwenza lula noma ukwenza ngezifiso ukufunda
Indlela Yokufunda IBhayibheli Ukuze Uliqonde: Izinyathelo Zokuqala
Ungayifunda kanjani ibhayibheli ukuze uliqonde kahle
Ngaphambi kokuba uqale, zibuze lo mbuzo: “¿Ngazi kangakanani ngeBhayibheli? ". Ngisho nangaphandle kokuyifunda, abanye abantu bakhule bezwa izindaba ezivela ebhayibhelini, kodwa abanye abakaze babe nalokhu kuthintana okuyisisekelo neZwi likaNkulunkulu. Ukulesiphi isimo?
Qala ngokukhetha iBhayibheli lakho. IBhayibheli lalingalotshwanga ngeSpanishi, ngakho lihunyushiwe. Kukhona izinguqulo eziningana ngeSpanishi, kusukela kwezindala kakhulu, ngolimi lwakudala kakhulu, kuya kwezanamuhla kakhulu, kodwa okunzima. Ungayikhetha ngosayizi wephakethe noma inguqulo esetshenzisiwe enezincazelo ezansi kwesigaba.
Nquma ukuthi singakanani isikhathi ongasinikela ngosuku ngalunye. Uma ufushane ngesikhathi, funda isahluko noma ezimbili ngosuku. Uma unesikhathi esithe xaxa, ungafunda okwengeziwe. IBhayibheli liyincwadi enokuqukethwe okungokomoya, ngakho-ke kubalulekile futhi ukuthatha isikhashana ukuthandaza futhi uzame ukuqonda lokho okufundayo.
Njalo iphepha lephepha line- icendice ngaphezulu. Ngakho-ke uma ungazi ukuthi ikuphi incwadi yeBhayibheli, bheka ikhasi enkombeni. Sebenzisa izinsiza eziseBhayibhelini lakho.
Kufanele ngilifunde ngokulandelana kanjani iBhayibheli?
IBhayibheli lehluke kancane kwezinye izincwadi. Empeleni, iqoqo lezincwadi ezingama-66 eziqoqwe ngezinhlobo zemibhalo (zomlando, ezezinkondlo, ezeziprofetho, ezobuvangeli, i-epistolary ...), hhayi ngokulandelana, noma ngokulandelana kwazo. Ngakho-ke kulabo abasanda kuqala, akuwona umqondo omuhle ukuzama ukufunda ikhava ukumboza.
1. Uma kungokokuqala ukuxhumana neBhayibheli:
Qala ngelinye lamavangeli amane kusuka eTestamenteni Elisha:UMateo, uMarcos, uLucas noma uJuan. Laba bantu abane babhala i-biography kaJesu, ngamunye ebheka ngokwehlukile. Noma iyiphi yalezi zincwadi sizokukhombisa ukuthi uJesu ungubani, umlingiswa oyinhloko weBhayibheli.
Izenzo Zabaphostoli bala i- umlando wokusungulwa kweBandla ngemuva kokuvuka kukaJesu. Lokhu kungaba yincwadi ethokozisayo ye- funda ngemuva kwelinye lamavangeli.
para qonda kabanzi ngempilo yobuKrestu, ungafunda ezinye zezincwadi ngemuva kwezEnzo zabaPhostoli, njenge AmaRoma noma abaseThesalonika. Lezi zincwadi zizokusiza uqonde kangcono insindiso nokuthi impilo yehluke kanjani emuva kwalokho. Yizinyathelo ezinhle zokuthola ukuqonda okuyisisekelo ngevangeli.
2. Uma ufuna ukujulisa ulwazi lwakho jikelele ngeBhayibheli:
Qala ngokufunda izincwadi zomlando zeTestamente Elidala, kusukela kuGenesise kuya ku-Esteri. Lezi zincwadi xoxa indaba yokudalwa komhlaba futhi zizokusiza uqonde ukuthi uNkulunkulu usebenza kanjani kuwo wonke umlando. Futhi batshela indaba yabantu bakwa-Israyeli kanye nendima yabo ezinhlelweni zikaNkulunkulu.
Ngemuva kokufunda izincwadi ezinhlanu zokuqala zeBhayibheli, kungakuhle ukufunda incwadi yamaHeberu, kwiTestamente Elisha. Khumbula ukuthi ezinye zezincwadi zomlando zisho izindaba eziphindiwe, kepha ngezindlela ezahlukahlukene.
Izincwadi zeziprofetho (kusuka ku-Isaya kuye kuMalaki) tshela ukuthi uNkulunkulu waxwayisa kanjani abantu ngokuhamba kwesikhathi ngalokho okuzokwenzeka. Uma uthatha isinqumo sokufunda lezi zincwadi, kuwumqondo omuhle ukuzama ukuzifunda ngokulandelana kwazo bese ubheka ingqikithi yomlando ngaphambi kokufunda incwadi ngayinye.
Izincwadi ze iziprofetho weTestamente Elidala nencwadi ka Apocalypse, bangaba impela kunzima ukuyiqondar. Kepha ungakhathazeki. Ngisho nabachwepheshe beBhayibheli abahlakaniphe kakhulu banenkinga ethile yokufunda lezi zincwadi!
3. Izincwadi okufanele zifundwe noma kunini:
Izincwadi ze AmaHubo nezaga Kuyathakazelisa futhi kuyakha ukufunda nganoma yisiphi isikhathi, noma ngabe wazi kangakanani ngeBhayibheli. I- amahubo izinkondlo nezingoma ukwethembeka kakhulu kuNkulunkulu futhi incwadi yezAga inezinto eziningi izeluleko ezihlakaniphile zokuphila kwansuku zonke.
Izincwadi uma usuthuthuke kakhulu:
Izingoma: ziyizinkondlo ngokubaluleka kothando phakathi kwendoda nowesifazane.
Umshumayeli: kukhombisa ukungabi nalutho kwakho konke ngaphandle kukaNkulunkulu.
UJobe: yincwadi ehlola imibuzo enzima kakhulu ngokuhlupheka, ngaphandle kokunikeza izimpendulo ezilula.
Imisebenzi yokwenza lula noma ukwenza ngezifiso ukufunda
Lezi zibonelo ezingenhla ziyiziphakamiso ezimbalwa zokufunda iBhayibheli. Nawe ungakwenza bheka izinhlelo zokufunda online noma ezincwadini, okungasifanela kangcono isimo sakho.
Zama khuluma nompristi, umfundisi, noma umuntu onolwazi olwengeziwe lweBhayibheli. Lo muntu angakusiza ukuthi uzenzele isu elihle futhi aphendule yonke imibuzo yakho.
Uma uya njalo esontweni, Uzofunda kabanzi ngeBhayibheli nokusebenza kwalo empilweni yakho. Isonto liyiqembu labantu eliye lasibona isidingo sabo sokuhlangana ukuze bafunde, bafunde futhi baqonde iBhayibheli.
Kukhona nezinsizakusebenza eziningana ku-inthanethi nasezincwadini, njenge ukuzinikela kwansuku zonke, ukuphawula, izincwadi zeBhayibheli, njll.. ukukusiza uqonde kangcono umbhalo weBhayibheli, njengezichazamazwi, amamephu, imininingwane ngomlando namasiko angaleso sikhathi. Uma ungafundi, kungenxa yokuthi awufuni!
Lokhu bekulokhu! Siyethemba ukuthi le ndatshana ikusiza ukuthi wazi ungayifunda kanjani ibhayibheli ukuze uyiqonde. Uma manje ufuna ukwazi i- isizathu sokuthi kungani uJesu aqalekisa umkhiwane, qhubeka upheqa Thola.online.
Kungani uJuda akhaphela uJesu